Dowlada Mareykanka oo ku eedeeyasay Ruushka in ay hubaynayaan kooxda Taliban – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDowlada Mareykanka oo ku eedeeyasay Ruushka in ay hubaynayaan kooxda Taliban
Dowlada Mareykanka oo ku eedeeyasay Ruushka in ay hubaynayaan kooxda Taliban
Hiiraan Xog, Mar 23, 2018:- Ruushka ayaa taageeraya islamarkana hub siinaya kooxda Taliban, waxaa sidaasi BBC u sheegay madaxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afqaanistan.
Wareysi gaar ah oo uu siiyay BBC, Gen John Nicholson waxa uu sheegay in uu arkay “howlo xasillooni daro ah oo ay Ruushka wadaan.”
Waxa uu intaa ku daray in hubka Ruushka laga soo galiyay dhanka xudduuda Tajikistan loona keenay Taliban, balse ma uusan sheegin tirada iyo inta uu dhan yahay hubkaasi.
Dowladda Ruushka ayaa horey u beenisay eedeeynta Mareykanka , iyaga oo sheegay in aan arrintan wax caddeyn ah loo hayn.
Hasa yeeshee eedeeyntan cusub ayaa ku soo beegmaysa xillli xasaasi ah oo xiriirka Ruushka iyo Nato uusan wanaagsanayn.
Britain iyo Ruushka ayaa gorradda iskula jira ka dib markii ay UK ku eedeeysay Ruushka in ay ka dambeeyeen sumayntii nin horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa.
Dhanka kale guddiga sirdoonka u qaabilsan aqalka Congareska Mareykanka ayaa daabacay warbixin ka hadlaysa faragalintii la sheegay in Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii Mareykanka 2016.
Gen John Nicholson ayaa sheegay in ay adagtahay in la qiimeeyo baaxadda ay la egtahay taageerada Ruushka ay siiyaan Taliban.
Balse saraakiil sarsare oo ka tirsan booliiska iyo militariga Afqanistan ayaa waxay BBC u sheegeen in waxyaabaha ay Ruushka siiyaan Taliban ay ka mid yihiin qalabka xilliga habeenkii wax lagu arko, hubka culus iyo midka heerka dhexe ee darandooriga u dhaca iyo hubka fudud.
Ila wareedyo laga helay Afqanistaan ayaa muujinaya in laga yaabo in hubkani loo isticmaalay ciidamada Afqanistaan iyo la taliyayaashooda dhanka dagaalka.
Hasa yeeshee, Ruushka si muuqata oo cad saaxib ulama aha Taliban.
Midowgii Sofiyeet ayaa dagal adag la galay kooxo Mujaahidiin ahaa oo uu Mareykanka taageerayay dalka Afqanistaan sanaddii 1979.
AKHRISO:- Nin u xirnaa 31 sano dambi uusan galin oo magdhaw la siiyay